Re: Aaminaad | Martech Zone
Mar labaad ayey dhacday. Intii aan dib u eegay liiska (aan la joojin karin) ee emayllada garaacayay sanduuqa sanduuqa, waxaan ogaaday emaylka jawaabta. Khadka maadada, dabcan, wuxuu kubilaabmay RE: markaa indhahaygu way qabteen oo markiiba waan furay.
Laakiin jawaab ma ahayn. Waxay ahayd suuqley u maleynayay inay kordhinayaan sicirka furan iyagoo been u sheegaya dhammaan macaamiishooda. Intii ay shaqeyneysay sicirka ay furan yihiin, waxay kaliya lumiyeen himilo waxayna ku dareen rukun ka saarid ololahooda. Waxaa laga yaabaa in sicirka furan uu keenay qasabno iyo iib, laakiin anigu ganacsi la geli maayo qof sidan oo kale ah.
trust waa farqiga u dhexeeya qof fura oo dhagsanaya farriimaha suuqgeynta emaylkaaga iyo qof dhab ahaantii wax iibsada oo ganacsi la sameeya shirkaddaada. Haddii aan kugu aamini karin inaad ii soo dirto emayl daacad ah, kuma aamini karo inaad xiriir ganacsi oo qoto dheer ila yeelato.
Ha igu qaldan, anigu kama ihi nacasnimo aamin ah. Waxaan garwaaqsaday mararka qaar shirkadaha aaminka ah inay "ku been abuuraan ilaa ay ka dhigayaan" shahaadooyin, natiijooyinka sahaminta, markhaati, qiimeyn, qiimeyn, iwm. Lahaanshaha joogitaanka websaydhka ee kicinaysa kalsoonida ayaa ah istaraatiijiyad muhiim u ah kordhinta heerarka beddelashada.
Dhibaatada gaarka ah ee halkan ka jirtaa waxay tahay tii hore aaminay aasaasay markii aan ka mid noqday iyaga. Aniga aaminay cinwaanka e-maylkayga iyaga si ay ila soo xiriiraan. Laakiin ficilku wuxuu la yimaadaa mas'uuliyado fudud… ha ila wadaagin cinwaanka emaylkayga, ha ku xadgudbin cinwaanka emaylkayga, beenna ha iigu sheegin emayllada.
Kani maahan ra’yigayga shaqsiga ah. Waxaan aaminsanahay inaad ku socoto layn khafiif ah oo leh Sharciga CAN-SPAM. CAN-SPAM si fudud ugama hadlayo awooda ka bixida rukunka, waxay sidoo kale si cad u sheegaysaa inay tahay inaad leedahay khadad mawduucyo leh oo khuseeya - marka loo fiiriyo waxyaabaha ku jira jirka oo aan khiyaanayn. IMO, ku darista "Re:" khadkaaga maadada waa khiyaano.
Tags: karaa-spamkhadadka maaddooyinka khiyaanada lehemailkhadka mawduuca emaylkareJawaabspamkhadka mawduucakalsooni
Dhibaatooyinkeyga ku saabsan Barnaamijka Maareynta Mashruuca
Sep 3, 2013 at 5: 39 PM
In kasta oo aanan diidani. Waxaa laga yaabaa inaad noqotid wax yar. Kaliya sheeg '. 😉
Sep 4, 2013 at 9: 46 AM
@curtfranke: disqus - noqoshada?
Sep 4, 2013 at 11: 08 AM
Waan kula jiraa (Kaliya weydii carruurtayda.)
Sep 5, 2013 at 6: 53 PM
Waxaan u maleynayaa in tan ay wadaan dad maskaxiyan isku dayaya inay hagaajiyaan halbeegyada shakhsiga ah iyadoon loo eegin qiyaasaha la xiriira. Nooca sida fekerka ah in aragtida bogga ee sii kordheysa ay si toos ah ugu tarjumeyso lacag.